जनयुद्ध दिवसको अवसर पारेर पूर्व एमालेलाई प्रचण्डकाे यस्तो प्रश्न! – भिडियोसहित – PathivaraOnline
Home > भिडियो > जनयुद्ध दिवसको अवसर पारेर पूर्व एमालेलाई प्रचण्डकाे यस्तो प्रश्न! – भिडियोसहित
admin February 13, 2019 भिडियो, समाचार 0
फागुन १, काठमाण्डौ । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनयुद्ध दिवसमा पूर्व एमालेका तर्फबाट शीर्ष नेताहरुको उपस्थिती नभएकोप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । नेकपाले मनाएको जनयुद्ध दिवसमा अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली भने सहभागि थिएनन् । पूर्व एमालेकोतर्फबाट हालको नेकपाका सचिवालयका महासचिव विष्णु पौडेल दाहालको दायाँतर्फ बसेका थिए भने संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ बायाँतर्फ बसेका थिए ।
कार्यक्रममा नेकपाका शीर्ष नेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायतको अनुपस्थितीले पार्टी एकता अझै मजबुत नभएको संकेत गरेको छ । बामदेव गौतम भने झुलुक्क पुगेर फर्किए, मञ्चमै पुगेनन् । विगतमा तत्कालिन माओवादीले गरेको जनयुद्धलाई लामो समयसम्म आलोचना गर्दै आएका पूर्व एमालेका नेताहरु पार्टी एकता भएपछि त्यस विषयमा बोल्नै छाडेका छन् ।
मदन भण्डारीको स्मृति दिवसमा पार्टी एकता र फागुन एक गते जनयुद्ध दिवस मनाउने विषयमा पार्टीभित्र सर्वसम्मत भएको उनले दावी गरेका छन् । अध्यक्ष दाहालले सबै कम्युनिष्टहरुलाई एकतावद्ध हुन आग्रह पनि गरेका छन् । समृद्धिको यात्राका लागि सबै कम्युनिष्टहरु एक भएर विश्वलाई नै उदाहरण प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे ।
मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्दलाई लक्षित गर्दै दाहालले विगतमा जनयुद्धमा संलग्नपक्षलाई पनि एकतामा आउन आउन आग्रह गरे । एक भएर समाजवादको जग बसाल्नुको विकल्प नभएको भन्दै दाहालले पटकपटक एकताका लागि आग्रह गरे । देशलाई सफल बनाउनका लागि एक दुई जना नेता वा समुह मात्रै लागेर नहुने भएकाले सबै एकजुट हुनुको विकल्प नभएको दाहालको भनाई छ ।